देउवा सरकारको दुई महिना पूरा, मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउला ? - Shirish News
देउवा सरकारको दुई महिना पूरा, मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउला ?
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार ०८:५२ बजे
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आज दुई महिना पूरा भएको छ।
त्यसयता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंले सम्हालिरहेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निस्कृय नभइसकेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समस्या भएको हो। अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भए दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसो हुँदा मन्त्री बन्न नपाए चार जना सांसदले पार्टी फुटाउन सक्ने जोखिम छ।